News Archives - Page 50 of 50 - Saturngod
Posted on Updated April 1, 2007 by saturngod
ကျွန်တော်တို့ MYSTYER ZILLION COMPUTER FORUM ကို… http://www.mysteryzillion.com /forum/ Computer ပိုင်းတွင် အခက်အခဲဖြစ်နေသူများ…Computer ပိုင်းကို စတင်လေ့လာသူများ…Computer ပိုင်းတွင် ဆွေးနွေးလိုသူများ…Computer ပိုင်းတွင် နည်းပညာဖြန့်ဝေလိုသူများ… နှင့်Computer ပိုင်းနှင့်သက်ဆိုင်သော နယ်ပယ်လေးတစ်ခုကို ကျွန်တော်တို့ တည်ဆောက်ထားခြင်းဖြစ်သည် မြန်မာများ စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာစွာဖြင့်….ဗဟုသုတ ၊ ပညာများ တိုးတက်စေလိုသောကြောင့်…ကျွန်တော်တို့ ကြိုးစားပြီး တည်ဆောက်ထားခြင်းပင်Member များ ၊ လာရောက်လေ့လာသူများ အားလုံး စိတ်ရောလူရော ကျန်းမာချမ်းသာပါစေ ခင်ဗျာ… Saturngod
MYSTERY ZILLION COMPUTER FORUM
Apirl Fool တွင် အရူးမလုပ်ပဲ…MYSTERY ZILLION COMPUTER FORUM ကြီးကို စတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်…www.mysteryzillion.com/forum/
Posted on Updated March 22, 2007 by saturngod
အင်တာနက်အိမ်ကနေ သုံးတာကိုလျှော့မှပဲ…ဒီနေ့ bill လည်းရရောလန့်တောင်လန့်သွားတယ်….32 FEC တဲ့ဗျာ…Usage Over 12:32 တဲ့…သေရော….ရှိတဲ့ ပိုက်ပိုက်လေးတွေကတော့ ပြန်ခန်းအုံးမယ်..စာမေးပွဲပြီးရင်တောင် လည်ဖို့ မပြောနဲ့ အကြွေးတောင်တင်အုံးမယ်….စိတ်ညစ်တယ်…စာတွေလည်းမရသေးပါဘူးဆိုမှ…အင်း….စာမေးပွဲပြီးရင်တော့ Spam ပို့တဲ့ အကြောင်းလေးရေးပါအုံးမယ်…7 April ရောက်ရင်ပေါ့…အခုတော့ စာတွေ လိုက်ကူးလိုက်အုံးမယ်…
ကျွန်တော့် နာမည် အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း….
Posted on Updated March 16, 2007 by saturngod
ယခု ကျွန်တော့် မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေဆီကို ကျွန်တော့်နာမည်နဲ့ ဂျာနယ်မကောင်းကြောင်းစာ ပေးပို့ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်….အဲဒီစာကို ကျွန်တော်ပို့တာမဟုတ်ပါဘူး…နောက်ပြီး အဲဒီစာက ကျွန်တော့် Gmail SMTP server ကထွက်တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး…ဘယ်သူလုပ်လဲဆိုတာကိုတော့ ကျွန်တော်မသိရသေးပါဘူး….ကျွန်တော့်နာမည် အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ရောက်ရှိလာတဲ့ စာများအတွက်….မိတ်ဆွေ အပေါင်းအသင်း သူငယ်ချင်းများကို တောင်းပန်ပါတယ်….
Posted on Updated March 9, 2007 by saturngod
Gmail က စာဝင်တဲ့ ပုံစံနည်းနည်းပြောင်းသွားတာလား မသိဘူး..ဒါမှ မဟုတ် server ပဲ hack ခံရတာလားမသိဘူး…MMGltie မှာ စာဝင်တဲ့ ပုံစံ မတူဘူးဖြစ်သွားတယ်…Tag တွေ ကြောင့် ပြသနာတက်သွားတယ်ဗျာ..< တွေကို သူက u003c ဆိုပြီးပြောင်းလိုက်တာ...အခုတော့ ကျွန်တော်ပြင်ပြီးသွားပါပြီ….နဂိုအတိုင်းပြန်ပေါ်အောင်လုပ်ပြီးပါပြီ…
Thank You For Sponsor
Posted on Updated February 9, 2007 by saturngod
ကျွန်တော့်အား web hosting sponsor ပေးသော USA မှ ကျွန်တော့် အစ်ကို အား အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ အစ်ကို့ကျေးဇူးကြောင့် ကျွန်တော်ဒီထက် ကောင်းသော project များကို ရေးသားလို့ရပါပြီ။ Traffic ပြသနာလည်း ဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီ။ ဒီကနေ ကျွန်တော် အစ်ကို့ ကိုကျေးဇူးအရမ်းတင်ရှိပါတယ်။
MMGlite တွင် Attachment File များကို http://mmglite.awardspace.com တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ mmglite2.awardspace.com တွင် အသုံးမပြုနိုင်ပေ။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် domain နာမည် တွင် Number ပါဝင်လာသောကြောင့် Attach File Upload လုပ်ရာတွင် ပြသနာဖြစ်ပေါ်သောကြောင့် upload လုပ် မရခြင်းဖြစ်ပါသည်။